गतिलो फिल्म नबनाउने अनि जाडोले चलेन भन्ने ?
२०७६ पौष २१ सोमबार ११:५७:००
काठमाडौं । दुई नेपाली चलचित्र फागुन ९ मा एक साथ रिलिज हुँदै छन्– ‘आमा’ र ‘सेन्टी भाइरस’ । यी दुवै वर्षकै अपेक्षित चलचित्र पनि हुन् । दुई चलचित्र एक साथ आउँदा ‘सो’ बाँडिन्छ । दर्शक बाँडिन्छन् । अन्ततः मारमा पर्छन् निर्माता ।
फागुनपछि चलचित्रको ओइरो छ । एकै दिन एकभन्दा धेरै चलचित्र रिलिज हुँदै छन् । अहिले भने हप्तौं भइसक्यो नेपाली चलचित्र रिलिज भएकै छैनन् । नोटिस भएका चलचित्र माघ २४ सम्म छैनन् । कारण– मौसम चिसो छ । तर, यही चिसोमा बलिउड मुभी ‘गुड न्युज’ र ‘दबङ ३’ आए । सय करोड क्लबमा प्रवेश गरे । नेपाली चलचित्र ‘लुट’ पुसको चिसो ठिहीमै रिलिज भएर ब्लक बस्टर भएको थियो ।
यद्यपि नेपाली निर्देशक, निर्माता जाडो महिनामा चलचित्र चल्दैनन् भन्न छाड्दैनन् ।
जाडोका कारण चलचित्र चल्दैनन् भन्ने चलचित्रकर्मीको तर्कमा निर्देशक तथा कलाकार दीपकराज गिरी सहमत छैनन् । चलचित्र नराम्रो हुनु नै नचन्नुको मुख्य कारण हो भनेर स्वीकार्न नसक्नेहरू जाडोमा चलेन भन्दै आत्मरतिमा रमाउने गरेको उनी बताउँछन् । “जब चलचित्र चल्दैन, त्यसपछि जाडोमा पनि चल्दैन, गर्मीमा पनि चल्दैन । हावाहुरीमा पनि चल्दैन, असारको झरीमा पनि चल्दैन । भूकम्पमा त झन् चल्दैचल्दैन,” उनी व्यङ्ग्य कस्छन्, “यस्ता धेरै कारण छन् चलचित्र नचल्ने । तर समग्रमा भन्ने हो भने नेपाली चलचित्रै चल्दैनन् ।”
यथार्थमा नेपाली चलचित्र राम्रो बन्छन् भन्नेमा धेरैलाई विश्वास नरहेकाले दर्शक भड्किएको उनको बुझाइ छ । “चलचित्र जाडो भएर हैन नराम्रो भएर नचलेको हो । आत्मरतिमा रमाउनलाई जाडो र गर्मी भएकाले चलेनन् भनेर भन्ने मात्रै हो,” दीपक भन्छन्, “अरूको राम्रो चलचित्र चल्यो भने पनि दसैं, तिहार, बिदा भएकाले चल्यो भन्दिन्छौं ।” चलेका चलचित्रको पनि राम्रो समीक्षा नभएको र कमजोर चलचित्र भए पनि निर्देशक निर्माताहरू केमा कमजोरी भयो भनेर स्वीकार नगरे मौसमलाई दोष दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
निर्देशक प्रदीप भट्टराई केही हदसम्म चिसोको प्रभाव दर्शकमा देखिए पनि अन्ततः कन्टेन्ट हाबी हुने बताउँछन् । राम्रो चलचित्र भए चिसो अथवा गर्मी मौसमले केही फरक नपार्ने उनको पनि बुझाइ छ । “राम्रो चलचित्र भए मौसमले खासै असर गर्दैन । चलचित्र चल्ने मौसमले होइन । राम्रो चलचित्र नभएपछि हल जाँदैनन्, गर्मीमा पनि तराईमा दर्शक हल जाँदैनन् भन्छन्,” प्रदीप भन्छन्, “राम्रो चलचित्र नभए पटि आँट नआएको हो । चलचित्र राम्रो हुँदैन त्यसैले आत्मविश्वास नभएपछि बाहाना खोजिएको मात्रै हो । नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भनेजस्तो मात्रै हो । चलचित्र लगाउन एसी टेम्प्रेचर खोजेर हुन्छ ?”
नेपाली चलचित्रकर्मीमा जाडोमा चलचित्र चल्दैनन् भन्ने मानसिकता रहेको निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल बताउँछन् । “जाडोमा दर्शक चलचित्र हेर्न जाँदैनन् भन्ने चलचित्रकर्मीमा मानसिकता छ,” उनी भन्छन्, “हिन्दी, अंग्रेजी चलचित्र जाडोमा आइरहेकै छन् त ।”
नेपाली चलचित्रकर्मीबीच बिदामा रिलिज गर्ने होडबाजी हुन्छ । बिदामा रिलिजको होडबाजीले चलचित्रकर्मीहरूबीच सम्बन्धमै तिक्तता आउने गरेको छ ।